लक डाउन र गाँउले जिवन ! - Gandaki Sandesh
लकडाउन सुरु भयो चैत एघार देखि ।
कोही पुगे गाँऊ तिर, कोही बाटो मा नै थे की !
बिस्वलाई नै ठुलो घाटा भयो यसैपाली ।
गाँऊ भरी भए मान्छे,शहर भयो खाली ।।२
हुन त, एउटा फाइदा नै भयो (२)
गाऊ बस्न हुन्न भन्ने
शहरीयाहरु लाई काईदा नै भयो ।
हामिले नी चामल फल्ने बोट देख्यौ ।
जन्मेको १२ बर्ष पछि हिलोमा टेक्यौ २
बा आमा नि साह्ै खुसि नाती नातिना साथमा भए ।
भन्छन, केही गुनासौ छैन जिवन संग ।
कालै आएर हामिलाई लगे ।
म सोच्छु , हरियाली अनि चिसो हावा ।
छङछङ गर्ने छहरे
यस्तो स्वर्गको टुक्रा जस्तो गाऊ छोडेर
मेरो बाबा ममि किन शहर झरे ।
म अचम्ममा परेँ ।
दुध भैसिले दिदोरहेछ,
चामल धेरै दुःख गरेर फल्दो रहेछ ।
हामिले त केही देखेकै रहेनछौ ।
गाऊमा त , सारै गाहे तर रमाईलो जिवन चल्दो रहेछ ।
ममि भन्नुहुन्छ मलाई, चप्पल नलाई बाहिर किन गाको ?
के को बाहिर?
आमालाई देखे मैलै चप्पल नलाई खेतबाट आको ।
मासु पनि कहाँ पैसाले पाईदो रहेछ
मासु खान त घरमा बाख्रा चाहिदो रहेछ ।
म सोच्थे (२) सबै कुरा पैसाले नै गर्छ ।
बस, हामि संग पैसा हुनपर्छ ।
हामि शहरीयाहरुलाई के थाहा ?
गाऊको घाममा काम गर्दा बाको निधार बाट कति पसिना झर्छ ।
यि नै बा आमालाई हामि पाखे भन्थ्यौ ।
टोपि च्यापिएको, निधार खुम्चीएको देखे,
गरिव भन्थ्यौ ।
यिनैको दुःख खाएर हामि शहरीया बन्थ्यौ ।
यिनै बा आमालाई फोहोरी र मैला गन्थ्यौ ।
कोरोना अनि लकडाउनले धेरै कुरा सिकायो ।
बिदेश गएको मामालाई नि गाऊमै झिकायो ।
माईजुको हातमा डोको नाम्लो थमायो ।
हामि पनि शहरको कोलाहल छोडेर आयौ ।
हाम्रो त झन मनै रमायो । २
आलिस्मा पनेरु, हिमालयन बोडीङ स्कुल, घारिपाटन, पोखरा १७